Homeसमाचारकोरोनालाई जि’तियो भनेर मक्ख नर्पनुहोस्, निको भएकामा देखा पर्यो यस्तो ख’तरनाक समस्या
May 14, 2021 admin समाचार 4466
शनिवारको एउटा बिहान मुम्बईका एक नेत्र शल्यचि’कित्सक डा. अक्षय नायर तीन हप्ता’अघि कोभिड-१९ बाट निको भएकी एकजना २५ वर्षीया महिलाको आँखामा शल्यक्रिया गर्ने प्रतीक्षा’मा थिए। अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा ती डाइबेटिक बिरामीको एकजना नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ चिकि’त्सकले पहिले नै जाँच गरिर’हेका थिए। उनले नाकबाट एउटा नली पठाएर एक प्रका’रको दुर्लभ तर खतरनाक ढुसी सङ्क्रमण म्युकोर्माइकोसिसबाट प्रभावित तन्तुहरू हटाइ’रहेका थिए।
यो उग्र प्रकृतिको सङ्क्र’मणले बिरामीका नाक, आँखा र कहिलेकाहीँ मस्तिष्क’लाई पनि असर गर्छ। ती विशेषज्ञले आफ्नो काम सकेपछि डा. नायरले ती महिलाको आँखा निकाल्ने काम ग’र्नेछन्। उनले भने,” मैले यी बिरामीको ज्यान जोगाउन उनको आँखा झिक्नुपर्नेछ। यो रोग यति विघ्न खत’रनाक छ।”भारतमा कोभिड-१९ को घातक दोस्रो लहर चर्कँदै गर्दा चिकित्सकहरूले ‘कालो ढुसी’ भनिने एउटा दुर्लभ प्रकृति’को सङक्रमण कोभिड-१९ बाट निको भएका बिरामीहरूमा बढ्दो रूपमा देखिएको बताइ’रहेका छन्।
म्युकोर्मा’इकोसिस के हो ?
यो एक प्रकारको निकै विरल देखिने सङ्क्र’मण हो। यो सामान्यतया माटो, बोटवि’रुवा, मल र कुहिएका फलफूल तथा तरकारीमा हुने म्युकोर भनिने ढुसीसँगको संसर्गबाट सर्ने गर्दछ। नायर भन्छन्, “म्युकोर’ जताततै हुन्छ। माटो एवं हावामा र स्वस्थ मानि’सको नाक र खकारमा पनि यो हुन्छ।”
यसले सा’इनस, मस्तिष्क र फोक्सोमा असर गर्छ र यो प्राणघातक पनि हुनसक्छः विशेषगरी डाइबे’टिक अथवा शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा गम्भीर कमजोरी देखिएका क्यान्सर वा एचआईभी एड्सका बिरा’मीहरूका लागि।चिकि’त्सकहरूको विश्वासमा म्युकोर्माइकोसिस, जसको समग्र मृत्युकारक दर ५० प्रतिशत जति हुन्छ, स्टेरोइड ‌‌औषधिको प्रयोगका कारण दे’खापर्न थालेको हुनसक्छ।
कोभिड-१९ का गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई ज्यान जोगाउने औषधिका रूपमा हाल स्टेरोइडको पनि प्रयोग भइरहेको छ। स्टेरोइडहरूले कोभिड-१९ का बिरा’मीहरूको फोक्सो’मा देखिने इन्फ्लामेशन अर्थात् सुजनलाई कम गर्छन् र तिनले शरीरको रोगप्रतिरोधी प्रणाली कोरोनाभाइरससँग जुध्न अति सक्रिय अव’स्थामा पुग्दा त्यसबाट पुग्नसक्ने केही क्षतिलाई रोक्न सघा’उने देखिएको छ।
तर तिनले रोग’प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि कमजोर गराउँछन् र रगतमा चिनीको मात्रा, ब्लड सुगर लेभल, बढाउँछन्। यस्तो डाइबि’टिज भएका वा डाइ’बिटिज नभएका दुवैथरी कोभिड-१९ का बिरामीहरूमा हुन्छ। यसरी रोगप्रतिरोधी क्षमतामा देखिने कमी नै म्युकोर्माइ’कोसिसको कारक हुनसक्ने ठानिएको छ।
भारतमा कोभि’डको दोस्रो लहरको सबैभन्दा धेरै मार परेका शहरमध्ये एक मुम्बईमा कार्यरत डा. नायर भन्छन्, उनले एप्रिल महिनामा मात्रै उक्त ढुसीको सङ्क्रमण भएका चालिस जना’जति बिरामी हेरिसकेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो कोभिड-१९ बाट घरमै निको भएका डाइबेटिकहरू थिए जसमध्ये एघार जनाको शल्यक्रि’या गरेर आँखा निकाल्न परेको थियो।
गत डिसेम्बर र फेब्रअरी महिनाको बीचमा मुम्बई, ब्याङ्गलोर, हैदराबाद, दिल्ली र पुणेजस्ता पाँच’वटा शहरस्थित उनका छजना सहकर्मीले ५८ जना उक्त सङ्क्रम’णका बसरामी हेरेको बताएका छन्।
धेरैजसो बिरामीमा कोभिड-१९ बाट निको भएको १२ देखि १५ दिनभित्रमा उक्त ढुसीको सङ्क्र’मण देखिएको थियो। मुम्बईको व्यस्तमध्ये एउटा साइअन अस्प’तालमा गत दुई महिनामा उक्त सङ्क्रमणका २४ जना बिरामी आएका उक्त अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विभागकी प्रमुख डा. रेणुका ब्रा’डूले बताइन्। गत वर्ष त्यो सङ्ख्या छ थियो।
तीमध्ये ११ जनाले एउटा आँखा गुमा’उनुपरेको थियो भने छ जनाको ज्यान गएको थियो। उनका धेरैजसो बिरामी अधबैँसे उमेरका डाइबेटिकहरू थिए जो कोभिड-१९ बाट निको भएको दुई हप्तापछि स’ङ्क्रमणग्रस्त भएका थिए। दक्षिणी शहर बेङ्गलुरुका आँखा शल्यचिकित्सक डा. रघुराज हेगडेले पनि त्यस्तै अनुभव सु’नाएका छन्। उनले गत दुई हप्तामा म्युको’र्माइकोसिसका १९ जना बिमी हेरेका छन् जसमध्ये धेरै युवा छन्।
चिकित्स’कहरू भन्छन्, तिनीहरू गत वर्षको कोरोनाभाइरस महामारीको पहिलो लहरको दाँजोमा हालको दोस्रो लहरका बेला उक्त ढुसीको सङ्क्रमणको घातकपन र बढ्दो सङ्ख्या देखेर उनीहरू अच’म्ममा परेका छन्। डा. नयार भन्छन्, गत दुई वर्षमा उनले मुम्बईमा दश जनाभन्दा बढी त्यस्ता बिरामीहरू हेर्नप’रेको थिएन। “यो वर्ष अवस्था एकदमै भिन्न छ,” उनी भन्छन्।बेङ्गलुरुमा डा. हेगडेले एक दशक लामो अनुभवमा वर्षमा एक वा दुईभन्दा बढी त्यस्ता बिरामी हेर्नु’परेको थिएन। ओएस नेपालबाट
मेलम्चीमा पानीको ब’हाव फेरि बढ्यो, स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो
June 19, 2021 admin समाचार 3451
सिन्धुपाल्चोक: सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा पानीको बहाव बढेको भन्दै स्थानीयहरुलाई सत’र्क रहन प्रहरीले आग्र’ह गरेको छ । शुक्रबार साँझ साढे ८ बजेदेखि खोलाको ब’हाव बढेकोले जोखिम कायमै रहेको बताइएको छ । मेलम्ची प्रहरी कार्यालयका
November 4, 2020 admin समाचार 8365
August 24, 2020 admin समाचार 20361